Dirty Conscious – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
တစ်နေ့နေ့ကျလျှင်တော့ ဆပ်ပြာမှုန့်ကောင်းကောင်း၊ ချေးချွတ်ဆေး ကောင်းကောင်းနှင့် လိပ်ပြာလေးတွေကို လျှော်ဖွပ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရပေဦးမည်။
ပြောရလျှင် ကျွန်တော် အလွန်တရာ အအိပ်မက်ခြင်းက စရပါမည်။
ကျွန်တော်သည် အလွန်အပျင်းကြီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ကို ဂုဏ်ယူစွာ ဝန်ခံလိုက်ချင်ပါသည်။ မတ်တတ်ရပ်နေတာထက် ထိုင်နေတာက သက်သာ၏။ ထိုင်နေတာထက် လဲလျောင်းနေတာက သက်သာ၏။ လဲလျောင်းနေတာထက် အိပ်စက်နေသည်က သက်သာ၏။ အဲသလို ကျွန်တော်က ယူဆ ယုံကြည်သည်။
ကွယ်လွန်သူ မိတ်ဆွေကြီး ရာမ(ဘူမိဗေဒ)က အိပ်လွန်းသည့် ကျွန်တော့်ကို သည်လို ပြောဖူးသည်။
“မောင်ရင်လေးက တော်တော် အအိပ်မက်တာပဲ။ တကယ်က မောင်ရင် သေချာစဉ်းစားကြည့်စမ်း… တစ်နေ့မှာ ရှစ်နာရီအိပ်တယ်ဆိုရင် တစ်နေ့ရဲ့ သုံးပုံ နှစ်ပုံကိုပဲ မောင်ရင် လူအဖြစ် နေခွင့်ရတယ်။ အဲဒီတော့ မောင်ရင် လူ့ဘဝမှာ အသက် ၆ဝ နေတယ်သာ ဆိုတယ်။ အိပ်နေတာက အနှစ် ၂ဝ၊ နိုးပြီး တကယ်တမ်း နေခွင့်ရလိုက်တာက အနှစ် ၄ဝ တည်းရယ်။ ဘယ့်လောက် နှမျောစရာ ကောင်းသလဲ၊ သိပ် မအိပ်စမ်းပါနဲ့ကွာ…”တဲ့။
သူ ပြောတာ ဟုတ်သလိုလိုတော့ အရှိသား။ သို့သော် ကျွန်တော် မလုပ်နိုင်။ ဘယ့်နှယ်ကွယ်… အိပ်နေတာက အရာရာကို မျက်စိ အနောက် သက်သာသည်။ ခေါင်းအခြောက် သက်သာသည်။
နိုးနေတဲ့ ဘဝမှာတော့ စိတ်တိုင်းမကျစရာ တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုးနှင့် နပန်းသတ်ရင်း လောကကြီးကို အလကားနေရင်းကို တံတောင်နှင့် တွက်ချင် နေတတ်မြဲ။ အိပ်ပျော်နေတဲ့ ဘဝမှာတော့ အရာရာက ကိုယ်နှင့် သိပ်မဆိုင်တော့။ စိတ်တိုင်းမကျစရာ နည်းသွားသလို စိတ်တိုင်းမကျတောင်မှ လောကကြီးကို သိပ် မထိခိုက်။
သည်တော့ ကျွန်တော့်လမ်းစဉ်သည် အိပ်ရေး အဓိက။
အအိပ်မက်သောသူအတွက် အိပ်မက်တွေ ထပ်တတ်သည်လားတော့ ကျွန်တော် မပြောတတ်နိုင်ပေ။ သေချာသည်ကတော့ အိပ်မက်တစ်ခုကို အထပ်ထပ်၊ အကြိမ်ကြိမ် ကျွန်တော် မက်နေမိသည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအိပ်မက်ကို ကျွန်တော် အလွန် မုန်းမိပါသည်။ သို့သော် ထိုအိပ်မက်က ကျွန်တော့်ကို အမြဲလိုလို နှိပ်စက်တတ်၏။
ကြာတော့ အအိပ်မက်သော ကျွန်တော်တစ်ယောက် အိပ်ရမှာကို ကြောက်လာခဲ့ပါပြီ။ အိပ်မက်ကို မမက်အောင် ဘယ်လိုကမှ တားဆီး ကာကွယ်လို့ မရနိုင်တော့သည့်အဆုံး မအိပ်ဘဲနေဖို့သာ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားယူရတော့မည့် ကျွန်တော့် အဖြစ်ပါ။
“သုတ္တောစ အိပ်ပျော်သော်လည်း၊ ကိဉ္စိ တစ်စုံတစ်ခုသော၊ ပါပံ မကောင်းသော အိပ်မက်ကို၊ နပဿတိ မမြင်မက်”ဟု မွှမ်းထားသော မေတ္တသုတ်တော်ကို ယုံကြည်စွာ အဖန်ဖန် ရွတ်ဆိုပြီး အိပ်လည်းမအောင်မြင်။ မေတ္တသုတ်က မစွမ်းဟု ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော့် အိပ်မက်ကလည်း ကောင်းသော အိပ်မက်မဟုတ်သည့်တိုင် မကောင်းသော အိပ်မက် (ဝါ) အိပ်မက်ဆိုး မဟုတ်သောကြောင့် မေတ္တသုတ်ပါ “ပါပံ – မကောင်းသောအိပ်မက်” စာရင်းတွင် ဝင်ဟန်မတူပါ။
“ရန္တုန္တိ မိတ္တံ အဝမင်္ဂလင်္စ”နှင့်လည်း စာရင်းဝင်ဟန် မတူပါ။
နှစ်မျိုးစလုံး စုံရွတ်၍လည်းကောင်း၊ တစ်မျိုးစီ ရွတ်ဆို၍လည်းကောင်း အိပ်ကြည့်သည့်တိုင် ကျွန်တော့် အိပ်မက်က ကျွန်တော့်ကို ကောင်းကောင်းကြီး နှိပ်စက်မြဲမို့ ကျွန်တော့် ခမျာလေးမှာ မအိပ်ရဲရှာတော့ပါ။
ကျွန်တော့်အိပ်မက်က သည်လိုပါ ခင်ဗျာ၊ စင်းစင်းလေးပါ…။
ကျွန်တော်သည် သိပ္ပံဘွဲ့ နောက်ဆုံးနှစ် စာမေးပွဲကို အကြိမ်ကြိမ် ကျရှုံးလျက် တက္ကသိုလ်တက်နေရသည်ဟုချည်း မြင်မက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော် ဘွဲ့ရတစ်ယောက်ပါ ခင်ဗျား…။
ဟုတ်ပ… ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် ဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှ ရူပဗေဒ ဘာသာ အဓိကနှင့် “ဘက်ချလာရော့ဖှ် ဆိုင်းယင့်စ်”ဟု မည်တွင်တော်မူပါပေထသော၊ ‘ဘီအက်စီဘွဲ့’ဟု ခေါ်ပါပေထသော၊ သိပ္ပံဘွဲ့ကို လက်ဝယ် ပိုင်ပိုင် ဆုပ်ကိုင်ထားပါ၏။
သို့ရာတွင် ကျွန်တော့်မှာ ဘွဲ့နှင့်ပတ်သက်နေလေသော စိတ္တဇ ဝေဒနာ တစ်နာ ဖြစ်နေပါသည်။
အထက်တွင် ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း ကျွန်တော်သည် အိပ်မက်ထဲတွင် ဘယ်သောအခါမှ ဘွဲ့မရသူ ဖြစ်လို့ချည်းနေပါသည်။
တကယ်က ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် ကျောင်းပြီးကာ ၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် ဘွဲ့ဝတ်ရုံကြီး ဝတ်လျက် ပါမောက္ခချုပ်ကိုယ်တိုင် ချီးမြှင့်ပေးသနားသော ဘွဲ့လက်မှတ်ကြီး ကျွန်တော်မျိုး “ငရေချမ်း” လက်ထဲ ရောက်နေသည်မှာ ၁၃-၄ နှစ် ရှိနေပါပြီ။
သို့သော်… ထို ၁၃-၄ နှစ်အတွင်းတွင် ထိုအိပ်မက်က ကျွန်တော့်ကို အကြိမ်တစ်ရာမက နှိပ်စက်ပြီးနေပါပြီ။
စတင်မြင်မက်စ လေး၊ ငါး၊ ဆယ်ခါတုန်းကတော့ သိပ်မထောင်းတာလှ…။ သာမာန်အိပ်မက် ကယောက်ကယက်ဟုသာ ခပ်ပေါ့ပေါ့ တွေးထင်ခဲ့မိသည်။ အထပ်ထပ်၊ အဖန်ဖန် ပြန် ပြန်မက်လေတော့မှ တစ်စ၊ တစ်စ မအီမလည် ဖြစ်လာရချေသည်။
တစ်ညများဆိုလျှင် အိပ်ချင်မူးတူးနှင့် ဖိုင်တွဲတစ်တွဲတွင် ချောင်ထိုးထားမိသော ဘွဲ့လက်မှတ်ကြီးကို ထုတ်ကြည့်ကာ ကျွန်တော့်နာမည်နှင့် ဟုတ်၊ မဟုတ် ထကြည့်မိရသည်အထိ ကယောင်ကတမ်းတွေ ဖြစ်ယူရသည်။
စိတ်ရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်တစ်ဦးဦးထံ သွားပြလိုစိတ်ပင် ပေါက်လာသည်။ ခက်နေသည်က ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ စိတ်ကုဆရာဝန်ဆီ ပုထုဇဉ်တွေ သွားသည့် ဓလေ့က မရှိ။ စိတ်ကုဆရာဝန်တွေကလည်း ဟိုနိုင်ငံတွေမှာ လို မပေါ…။
ကိုယ့်ပြဿနာကိုယ်တော့ စိတ်ရောဂါ မှန်းသိနေပြီ။ အိုး… အနာ သိမှတော့ ဆေးရှိရပေမပေါ့…။
ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ကုယူမည်။ ရေချမ်းပဲ၊ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်မှ မဟုတ်တာ၊ ဘာရမလဲ၊ ငါကွ… ဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မောင်းတင်လိုက်သည်။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကို အစအဆုံး အနုလုံပဋိလုံကြည့်သည်။ ဒါက ကုထုံးသဘောလေ၊ ဟဲ… ဟဲ…
စာမေးပွဲဖြေခဲ့ပုံတွေ အသေးစိတ် ပြန်စဉ်းစားကြည့်သည်။
အာရုံမှာ ထင်လင်းစွာ ဦးဦးဖျားဖျား ပေါ်လာလေသည်က ကျွန်တော် ပထမနှစ် သိပ္ပံလက်တွေ့ စာမေးပွဲ ဖြေခဲ့ပုံကလေး…။
တစ်နှစ်အတွက် ရူပဗေဒ လက်တွေ့သင်ခန်းစာ ၁၄ ခု လုပ်ရသည်ကို မှတ်မိနေသေးသည်။ စာမေးပွဲတွင် ထို ၁၄ ခုအနက်မှ တစ်ခုကို ဖြေရမည်။
ကျွန်တော်ရွှေဉာဏ်ရှင် ရေချမ်း(မဟာသောက်ပျင်း)က အဲဒါကို ခုနစ် ခုပဲ ကြိုကြည့်သွားသည်။ ၁၄ ခုထဲက ခုနစ်ခုလောက်သာ ကြည့်လိုက်လျှင် လုံလောက်ပြီဟု ကိုယ့်အတွေးနှင့်ကိုယ် ပိုင်းဖြတ်ချလိုက်သည်။
အဲ… တကယ်တမ်း စာဖြေခန်းထဲလည်း ရောက်လို့ မဲလည်း နှိုက်ချလိုက်ပါရော၊ ခွက်ခွက်လည်း လန်ပါလေရော ခင်ဗျား…။
ကံကြမ္မာကား တော်တော်ကြီးကို စုတ်ပဲ့ပုံရလေသည်။ ကျွန်တော် လုံးဝကြည့်မထားခဲ့သော ကျန်ခုနစ်ခုထဲမှ တစ်ခုကို ဖြေရမည်ဖြစ်လေ၏။ “အားလည်ကိန်း”ဆိုပဲ။ သေဟဲ့ နန္ဒိယဟု ကျဆင်းစွာ ဥဒါန်းကျူးရုံမှတပါး ကျွန်တော်ကကော ဘာများတတ်နိုင်ပါဦးမည်နည်း။ (ဗန်းမော်တင်အောင်၏ ထင်ရှားလှသော အသုံးအနှုန်းကို ဗြောင်ခိုးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စာပေ ဆားပုလင်းများ ဝမ်းသာကြစေကုန်သတည်း။)
အားလည်ကိန်းဆိုတော့ သူ့ပုံသေနည်းကို ဆယ်တန်းတုန်းက အသေ ကျက်ခဲ့ဖူးသဖြင့် ရေးနိုင်သည်။ သို့သော် ယင်းမှ ဆက်မလုပ်တတ်တော့။
တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီ ဖြေကြရသည်မို့ ဘေးဘီ၊ ဝဲယာမှ သူငယ်ချင်း အတန်းဖော်တွေကို အားကိုးလို့ကလည်း မရနိုင်တော့သည်မှာ သေချာနေသည်။
ထိုအခါ ကျွန်တော်သည် အဖြေလွှာနှင့် မေးခွန်းလွှာကို ရှေ့တွင်ချကာ ကျက်သရေအပြည့်၊ ဣနြေ္ဒအတိ၊ သိက္ခာအစုံနှင့် ငုတ်တုတ်ကြီး ထိုင်နေမိရလေတော့သည်။
ကွမ်းတစ်ယာကိုဝါးပြီး ကွမ်းသွေးနှစ်ခါလောက် ထွေးပြီးချိန်ခန့်အကြာတွင် ထိုင်ကိုယ်တော် ကျွန်တော့်အပါးသို့ စာမေးပွဲခန်းစောင့်သူ သရုပ်ပြ ဆရာလေး ရောက်လာပါသည်။
“ကြည့်ခဲ့ပါတယ် ဆရာ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က ကိုယ့်ဘာသာ ရွေးကြည့်လာတော့ မကြည့်တဲ့ထဲကဟာ ဖြစ်နေလို့ပါ…”
“မင်းကွာ၊ တော်တော်ဟုတ်တဲ့ကောင်…”ဟုပြောကာ ဆရာ ကျွန်တော့်အပါးမှ ခွာသွားပါသည်။
ကျွန်တော်ကား ငုတ်တုတ်…။ ကျွန်တော့်ရှေ့စားပွဲမှ အတန်းဖော် မိန်းကလေး စာငုံ့ဖြေရင်း ပေါ်နေသည့် ခါးသားဖြူဖြူလေးကို ကသိုင်းရှုနေမိသည်။
ကွမ်းတစ်ယာ အသေအချာ ညက်သွား၍ မျိုချလိုက်ပြီးချိန်လောက်အကြာတွင် စောစောက ဆရာလေး ရောက်လို့လာပြန်သည်။
“သိပ်ကို သေချာတာပေါ့ ဆရာရယ်။ ဒါပေမယ့် မဖြေနိုင်မှတော့ ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲ…”
“ခက်တဲ့ကောင်ကွာ…” ဟု ညည်းရင်း ဆရာ ထွက်သွားပြန်သည်။
ကျွန်တော်ကတော့ တစ်စက်ကမှ စိတ်မပူတော့။ ကိုယ့်အပြစ်နှင့် ကိုယ်။ ထင်ရာ လုပ်ချလာခဲ့ပြီးမှ ဖြစ်လာသော အကျိုးဆက်ကို ရဲရဲခံယူလိုက်ရုံသာ ရှိသည်။
နောင်တတွေ၊ ဘာတွေလည်း မရချင်။ ကိုယ်ဖြစ် ကိုယ်ခံ။ သည်အချိန်ကျမှ နောင်တတွေ ရနေလို့လည်း မရသောစာက ရတော့မည် မဟုတ်။ အဲတော့လည်း စိတ်အေးလက်အေးနှင့် တောင်တွေး၊ မြောက်တွေး။
ကွမ်းနောက်တစ်ယာ ထပ်ဝါးပြီး ညက်လုလုလောက်အကြာတွင် ဆရာလေး ရောက်လို့လာပြန်သည်။ သည်တစ်ခါ သူက ကျွန်တော့်ကို ခပ်တိုးတိုး ကပ်မေးသည်။
“မင့်ကို ဆယ်မိနစ် အချိန်ပေးမယ်၊ မင်းအပြင်မှာ စာသွားဖတ်ရင် ဖြေနိုင်မလား…”
“ဟား… သိပ်ရတာပေါ့ဆရာ၊ ဆယ်မိနစ်တောင် မလိုဘူး။ ငါးမိနစ်ဆိုရင်ကို ရတယ်ဆရာ…”
ကျွန်တော့်ဉာဏ်က အထူးဆင့်မှာ ရှိသည်။ လျှောက်လွှာစာရွက်နှင့် တစ်မျက်နှာခွဲသာသာ ရှိသည့် စာတစ်ပုဒ်ကို ငါမိနစ်အတွင်း ကြောင်ပုစွန် စားသလို သေသေချာချာ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ရသွားသည်။
သည်လိုနှင့် ပထမနှစ်စာမေးပွဲကို ကျွန်တော်တစ်ကောင် ယောင်တောင်ပေါင်တောင် အောင်မြင်ခဲ့လေ၏။
ဒုတိယနှစ်၊ တတိယနှစ် စာဖြေပွဲတွေမှာတော့ အလားတူတွေ ထပ်မဖြစ်တော့။ နီးမှ ကပ်တွန်းသွားသည့်တိုင် အောင်ရုံလောက်ကတော့ ဟန်မပျက် ဖြေနိုင်ခဲ့သည်ချည်းသာ။
အဲ… နောက်ဆုံးနှစ် စာဖြေပွဲရောက်တော့မှ တစ်ဘာသာမှာ ဗရချာ ရမ်းနေလေတော့သည်။ နျူကလီယာဘာသာ…။
ကျွန်တော် တစ်ပုဒ်သာ ဖြေနိုင်သည်။ ဖြေရမှာက ခြောက်ပုဒ်…။ တစ်ပုဒ်နှင့်တော့ အောင်မှတ်မရနိုင်သည်ကို ကျွန်တော် ကောင်းကောင်းကြီးကို သိနေသည်။
ပေးထားတာက ရှစ်ပုဒ်။ ဖြေထားတာက တစ်ပုဒ်။ ကျန် ခုနစ်ပုဒ်ထဲမှ တစ်ပုဒ်ကမှ ကျွန်တော် မဖြေတတ်တော့…။ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။
စတုတ္ထနှစ် တစ်နှစ်လုံး လက်တွေ့တန်းများက လွဲလျှင် မည်သည့် ပို့ချချက်တန်းကိုမှ မလိုက်ခဲ့။ အတန်းထဲသို့ပင်လျှင် ကျွန်တော် မရောက်ဖူး။ သည်တော့လည်း ကျွန်တော် မဖြေနိုင်သည်မှာ အဆန်း မဟုတ်လှပေ။
ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း ကျွန်တော်သည် ကိုယ်လုပ်လိုက်သည့်အတွက် ဖြစ်ပေါ်လာသော အကျိုးဆက်ကို အပြုံးမပျက် လက်ခံနိုင်သူဖြစ်ပေရာ ယခုလည်း ဘာကိုမှ ဆက်မကြိုးစားတော့ဘဲ အချိန်စေ့သည်အထိ သည်အတိုင်း ငုတ်တုတ် ထိုင်နေလိုက်သည်။
စာမေးပွဲခန်းတို့၏ စည်းမျဉ်းများအရ ဖြေဆိုချိန် သုံးနာရီအတွက် အနည်းဆုံး တစ်နာရီ မပြည့်ဘဲ ထွက်ခွာခွင့် မရှိသည်ကို ကျွန်တော် သိသဖြင့် တစ်နာရီ ပြည့်အောင် ထိုင်စောင့်နေရခြင်း ဖြစ်သည်။
တစ်နာရီလည်း တင်းတင်းစေ့ရော ကျွန်တော် နေရာမှ ထ ရပ်လိုက်သည်။ စာမေးပွဲခန်းစောင့်ဆရာ ကျွန်တော့်အနားသို့ ရောက်လာသည်။ အဖြေလွှာကို ထိုးအပ်လိုက်ချိန်တွင် ဆရာက မေးသည်။
“ဟုတ်ကဲ့ဆရာ”ဟု ကျွန်တော်ဖြေခိုက်တွင် ဆရာက ကျွန်တော့် အဖြေစာအုပ်ကို လှပ်ကြည့်သည်။
“ဟင်… မင့်ဟာက တစ်ပုဒ်တည်း…”
“ဟုတ်တယ် ဆရာ၊ အဲဒါပဲ ရလို့…”
ကျွန်တော် နာခံစွာ ထိုင်အချတွင် ဆရာက မေးခွန်း စာရွက်ကို ယူကြည့်ပါသည်။ မေးခွန်းကို အစအဆုံးဖတ်ကြည့်ပြီးသွားသောအခါ ဆရာက “သည်တစ်ပုဒ် ဖြေလေ…”ဟု မေးခွန်းတစ်ပုဒ်ကို လက်ညှိုးနှင့် ထောက်ပြပါသည်။
ကျွန်တော် မေးခွန်းကို ဖတ်ကြည့်ပြီး ခေါင်းရမ်းကာ…
“မဟုတ်သေးပါဘူးကွာ…။ သည်အပုဒ်ကတော့ မင့်မှာ ရှိတဲ့ ဆယ်တန်း ဗဟုသုတလောက်နဲ့တင် လျှောက်ရေးလို့ ရပါတယ်ကွာ။ ရေးစမ်း။ မင့် လက်ရေးနဲ့ဆို တစ်မျက်နှာခွဲလောက် ပြည့်အောင် ရေးလိုက်၊ အဲဒါပြီးရင် သွားကွာ။ စာပါရင် ပြီးရော။ ရေး…”
ကျွန်တော် သက်ပြင်းမောတစ်ချက် ချလိုက်ကာ ဆရာ ခိုင်းသည့်အတိုင်း ဆယ်တန်းအသိဖြင့် စတုတ္ထနှစ် သိပ္ပံဘွဲ့ စာမေးပွဲကို ဖြေချလိုက်ပါသည်။
(စာဖြေခန်းထဲက ထွက်ပြီး အတန်းဖော်တွေနှင့် ပြန်ဆုံမှ သိရသည်မှာ ထိုအခန်းစောင့်ဆရာသည် ကျွန်တော်တို့အတန်းအား နျူကလီယာ ဘာသာရပ်ကို ပို့ချပေးသည့် ကထိက ဖြစ်မှန်းသိရလေ၏။ ဆိုးလိုက်သည့်အဖြစ်ကား ကိုယ့်ဆရာကိုယ် မမြင်ဖူးသဖြင့် ဆရာမှန်း မသိသော အဖြစ်ပေတည်း။)
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဆရာက ကျွန်တော့်ကို အထက်ကနှယ် အဖြေခိုင်းသဖြင့်၊ ကျွန်တော်ကလည်း နာခံစွာဖြေချခဲ့သဖြင့် ကျွန်တော်သည် အနှီ နောက်ဆုံးနှစ် စာမေးပွဲကိုလည်း ဘာသာစုံ ဂရိတ် သရီးဖြင့် ယောင်တောင်ပေါင်တောင် အောင်မြင်ခဲ့ပြန်လေသည်တမုံ့။
ကံကောင်းချင်တော့ ကျွန်တော်တို့သည် တားမ်ပေပါ (ခေါ်) ဘွဲ့ယူစာတမ်းကို ရေးစရာ မလိုခဲ့ပေ…။ သည်လိုနှင့် ကျွန်တော် မဟာသောက်ပျင်းဘွဲ့ခံ မောင်ရေချမ်းသည် ၁၉၇၉ တွင် ကျောင်းပြီးကာ ၁၉၈၁ တွင် ဘွဲ့ယူခဲ့ပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့… သို့သော်… တကယ်တမ်းတွင် ကျွန်တော် ရူပဗေဒကို မတတ်မှန်း ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် အသိဆုံးဖြစ်လေသည်။
ရူပဗေဒ ဝေးစွ…။ ရူပဗေဒ ကျောင်းသားတို့ တတ်အပ်သော အဋ္ဌာရသများတွင် ပါဝင်သည့် အသုံးချသင်္ချာကိုပင် ကျွန်တော် လုံးဝ (လုံးဝ) မတွက်တတ်ပါပေ။
သည်တော့ အိပ်မက်ထဲတွင် ကျွန်တော် ကြိမ်ဖန်များစွာ ဒုက္ခနဲ့ လှလှ တွေ့နေရသည်မှာ မဆန်းလှပြန်ပေ။ ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်၌က မသန့်မှတော့ ထိုမသန့်သော လိပ်ပြာကလေးက မသိစိတ်ဖြင့် မြင်မက်နေသော အိပ်မက်ထဲတွင် ပျော်ရွှင်မြူးတူး လွတ်လပ်စွာ ဝဲပျံခုန်က စိုးမိုးပြလေမည်သာတည်း။
သည်လို စိတ်ကို သရုပ်ခွဲပြီးသကာလ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ကုရန် နည်းလမ်းကို ထပ်ဆင့် ဖွေရှာသည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ သည်ဘွဲ့ကို ကိုယ်နှင့် မထိုက်တန်မှန်း သိသည်။ သို့သော် ထိုက်ထိုက်၊ မထိုက်ထိုက်၊ တန်တန်၊ မတန်တန်၊ ထိုဘွဲ့လက်မှတ်ကြီးသည် ကျွန်တော့်လက်ထဲတွင် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ရောက်ရှိနေသည်။ သည်အချိန်ကျမှတော့ ဘယ်သူမှ ပြန်ယူလို့ မရနိုင်ပါလေတော့။ ဘယ်သူကကော ပြန်တောင်းနေပါလိမ့်မလဲ…။
ဒါဆို ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်အေးလက်အေး နေလိုက်ရုံပေါ့ကွယ်…။ ဒါလေးများ…။
ခက်တာက သည်ရွှေလိပ်ပြာ၊ တော်တော်လည်း ကူလီကူမာနိုင်သည်။ ဟုတ်ပရော…။ စိတ်ထဲတွင် စနိုးစနောင့်ကတော့ နိုင်လို့ နေတုန်း…။
တွေးစမ်း… ဖြေပြီး တွေးစမ်း…
အမယ်… အဲလို တွေးတော့ အလာကြီးပဲ…။
တကယ်တော့ သည်လောကကြီးမှာ အဲသလိုမျိုးတွေ ဖြစ်နေသူက ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းမှ မဟုတ်တာ…
တစ်နေ့နေ့ကျလျှင်တော့ ဆပ်ပြာမှုန့်ကောင်းကောင်း၊ ချေးချွတ်ဆေး ကောင်းကောင်းနှင့် လိပ်ပြာလေးတွေကို လျှော်ဖွပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရပေဦးမည်။
၁၉၉၅ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်မှာ ရေးသားပြီးစီးခဲ့ပြီး စာမူခွင့်ပြုချက်အမှတ် ၁၆၁၁/၂၀၀၃ (၁၁)နဲ့ လက်တွဲဖော်စာအုပ်တိုက်က ထုတ်ဝေထားတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ “ခြေရာပြိုးပြောက် လွမ်းပွင့်ကောက်သီ (ကိုယ်တိုင်ကြုံဝတ္ထုတိုများ)”စာအုပ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တာလေးကို ပြန်လည်တင်ဆိုက်လိုက်တာပါ။
Author lettwebawPosted on 22 April 2010 Categories Reproduction, Short Story
4 thoughts on “Dirty Conscious”
Dear saya ,
I haveasame dream like you.And I’m very lazy ,the name of lazy bone is other people call me. You’re right, not only you. Me too.Your writing is very good. This article hits me. Thanksalot.
22 April 2010 at 12:34 pm
ဆရာရေ ကျမ မက်တဲ့ စာမေးပွဲ အိပ်မက်ကတော့ စာမေးပွဲခန်းကို နောက်ကျမှ ရောက်သွားတာတို့။
စာတွေ တလုံးမှ မရဘဲ စာမေးပွဲခန်းထဲ ရောက်လာတာတို့။
ဘောပန်တွေ ခဲတံတွေ မပါဘဲ စာဖြေခုံမှာ ထိုင်နေမိတာတို့ …
ကျမလဲ ရူပဗေဒ အဓိက ယူခဲ့တာပဲ။ အဲဒီတုန်းကတော့ စာလဲဖတ်တယ်။ စာတွေလဲ အကုန်ရတယ်။
ခုတလုံးမှ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ကျမက ကျောင်းစာဖတ်ရင် စာမေးပွဲ ဖြေဖို့သာ ဖတ်ခဲ့တာ။ ပြီးတာနဲ့ အကုန်မေ့ရောပဲ 😛
စာမေးပွဲအိပ်မက်ကတော့ လူတိုင်းမက်ကြတယ် ထင်ပါရဲ့ ဆရာရေ။ ကျမက စာမေးပွဲကို မကြိုက်ဘူး။
ဘွဲ့ရပြီးတော့ စာမေးပွဲနဲ့ လွတ်ပြီမှတ်တာ ခု စာမေးပွဲတွေ တပုံကြီးနဲ့ ထပ်တိုးနေလို့ ဒုက္ခနဲ့ လှလှ တွေ့နေပါတယ်။
(လောလောဆယ် စာမေးပွဲနီးပြီမို့ စာဖတ်နေပါတယ် – မအိပ်ခင် တနာရီ အိပ်ရာထ တနာရီ ဘလော့တွေ လိုက်ဖတ်တယ်) 😀
22 April 2010 at 4:10 pm
ဘကြီး ..တူမလဲ စာမေးပွဲအိပ်မက်တွေခဏ ခဏမက်တယ်။ စိတ်အားမငယ်ပါနဲ့ ဘကြီးရ..ဘွဲ့ရပြီးဘာမှမတတ်တာ ဘကြီး တစ်ယောက် တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ 🙂
20 January 2013 at 6:12 am
အခုခေတ်ကတော့ ဘာလဲတော့မသိပါဘူး ပိုက်ဆံ ရှိရင် အောင်စာရင်းမှာမပါတာတောင် အောင်ပါကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ
LeaveaReply to ရဲရင့် Cancel reply
Previous Previous post: A little I have just learned about Singapore
Next Next post: Encounter with those who want auspicious start